IiTattoos zolwandle, ingqokelela yoyilo | Ukuzoba
IiTattoos zolwandle, ingqokelela yoyilo kunye nemizekelo
UAntonio Fdez | | Izinto kunye neeTattoos zezinto
Los iiTattoos zolwandle zinentsingiselo enomdla ngokwenene. Isimboli esiyakothusa ngaphezulu kwesinye. Kwaye ke, ekuboneni nje, le nto sinokuyifumana kunxweme nakulwandle, sinokucinga ukuba azinantsingiselo inzulu. Ngokuchasene noko. Kungenxa yoko le nto sigqibe ekubeni senze olu qokelelo lupheleleyo loyilo.
Sikucebisa ukuba ujonge oku Ingqokelela yolwandle yeqokobhe. Ukuba ucinga ukwenza umvambo wegobolondo lolwandle, nangaluphi na uhlobo lwesitayile, ukubonisana negalari ehamba neli nqaku uya kuba nakho ukuphelisa ukuthandabuza kuba senze ukhetho olupheleleyo Iitato kunye nemizekelo. Uya kuba nakho ukuthatha izimvo zokuya nesiseko esichazwe kwangaphambili kwisifundo.
1 Intsingiselo ye tatto seashell
2 Iifoto zeTattoos zoLwandle lweShell
Intsingiselo ye tatto seashell
Zithetha ntoni iitattoos zeqokobhe lolwandle? Iigobolondo zolwandle zinxulunyaniswa nokhuselo lomzimba, lwengqondo nolwemvakalelo. Kwiinkcubeko ezithile luphawu lokuphilisa. Banempawu ezithile ezinxulunyaniswa ne-intuition, uvakalelo kunye nokucinga. Kwelinye icala, asinakuyihoya into yokuba oonokrwece bathambile kwaye bathumela izilwanyana.
Iitattoos zolwandle lwaselwandle zikwasetyenziselwa ukumela ukutyeba kwenkcubeko yasePolynesia. Iqokobhe lekhonkco lihlonitshwa yile nkcubeko njengesixhobo esibalulekileyo sokudlala ixilongo ngexesha leziganeko ezibalulekileyo.
Iifoto zeTattoos zoLwandle lweShell
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuzoba » Iindidi zeetattoos » Izinto kunye neeTattoos zezinto » IiTattoos zolwandle, ingqokelela yoyilo kunye nemizekelo
Iitattoos ezixuba iintyatyambo kunye neemilo zejiyometri
Iitattoo zeminwe yomnwe